Amanye amapelepele we-piquillo agcwele imifino, kulula kakhulu ukwenza | Ukupheka Kwekhishi
UMontse Morote | | Iziqalo Ezibandayo, IMontaditos, Side Dish Ungadliwa, Ukupheka okunempilo
I-Los upelepele we-piquillo Ziyizinto zakudala esingazilungisa ngokugcwaliswa okuhlukahlukene, futhi sisebenzise okunye okusele, singakudla kushisa noma kubande futhi sikushiye kulungiselelwe kusengaphambili.
Kulomcimbi ngilungiselele amanye upelepele we-piquillo ogcwele imifino, ngisebenzisa imifino yasehlobo. Kuhle kakhulu ipuleti yemifino ukuthi njengokuqalisa noma ngesidlo sakusihlwa kuhle kakhulu.
I-can of piquillo pepper (12 pepper)
2 upelepele oluhlaza
4 wezipuni kakhilimu owuketshezi
Sigeza imifino bese siyisika ibe yizicucu ezincane.
Sifaka ipani lokuthosa ngamafutha, susa ugalikhi no-anyanisi, lapho kuqala ukuthatha umbala sizofaka eminye imifino bese siyivumela ipheke cishe imizuzu eyi-10.
Ngemuva kwalesi sikhathi sizobeka utamatisi othosiwe futhi sizoyivumela ipheke eminye imizuzu engu-5, bese sifaka usawoti omncane, i-oregano, upelepele nengxenye yengilazi yamanzi, sizoyishiya ize iphekwe ngendlela esithanda ngayo.
Uma seziqedile, sizobeka ukhilimu owuketshezi, sizohlanganisa konke kahle, sizonambitha usawoti kanye nopelepele, sizocisha umlilo bese siwuyeka uphumule futhi uphole kancane.
Ngemuva kwalokho sizoqala ukugcwalisa upelepele ngalokhu kugcwaliswa, sizoshiya eceleni kancane isoso bese siwagcwalisa bese siwabeka kuthileyi.
Okwe-sauce sizothatha okuncane kwemifino bese siyichoboza, uma kukhulu kakhulu sizofaka amanzi amancane. futhi Simboza upelepele.
I-sauce enhle kakhulu futhi elula.
Singabakhonza kushisa noma kubanda.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Iziqalo Ezibandayo » Upelepele wePiquillo ogcwele imifino
I-Quinoa enemifino esusiwe